SPEEDTEST FREE DOWNLOAD - MMEMME NYOCHA - 2019
Isi Mmemme Nyocha
SpeedTest bụ obere usoro maka ịlele ọsọ nke nnyefe mgbasa ozi na ibe weebụ ma ọ bụ kọmputa.
Mgbanwe nke nnyefe ego
Iji chọpụta ọsọ ahụ, ngwa ahụ na-eziga onye na-akpọ ya (nkesa) aha ya ma nweta ụfọdụ data sitere na ya. Nsonaazụ na-edekọ oge nke ule ahụ gafere, ọnụ ọgụgụ octets natara na ọnụego mgbasa ozi.
Tab "Chart Owuwu" Ị nwere ike ịhụ chaatị nhazi ahụ.
Onye ahịa na ihe nkesa
A na-ekewa usoro ahụ n'ime akụkụ abụọ - onye ahịa na ihe nkesa, nke na-eme ka o kwe omume ịlele ọsọ n'etiti kọmputa abụọ. Iji mee nke a, dị na-amalite ihe nkesa ma họrọ faịlụ maka ule, site n'aka onye ahịa (na igwe ọzọ) nyefee arịrịọ ị ga-ebu. Ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke data bụ 4 GB.
A na-ebipụta ngwa SpeedTest site na iji ọrụ a wuru.
Enwere ike iziga data na ngwa nbipute ma ọ bụ chekwaa na faịlụ nke otu n'ime usoro dị, dịka ọmụmaatụ, na PDF.
Obere nkesa a;
Na-eme nanị otu ọrụ, ọ dịghị ihe dị oke;
Kesaa maka n'efu.
Ọ dịghị ezigbo eserese oge;
Ihe atụ dị iche iche: ọ gaghị ekwe omume ịchọpụta ọsọ ọsọ nke njikọ Ịntanetị;
Enweghị asụsụ Russian.
SpeedTest bụ usoro dị mfe maka ịlele ọsọ nke Intanet. Nnukwu maka nyochaa njikọ na saịtị dị iche iche na mpaghara netwọk mpaghara.
Download SpeedTest maka n'efu
Wepu usoro mmemme kachasị ọhụrụ nke saịtị ahụ
LAN Speed ​​Test Mmemme maka ịlele ọsọ nke Intanet SpeedConnect Internet Accelerator MemTach
Kesaa isiokwu na netwọk mmekọrịta:
SpeedTest bụ ngwa maka ịlele ọsọ nke ntinye data n'etiti kọmputa abụọ ma ọ bụ kọmputa na sava weebụ. Ọ nwere ọrụ nke ịzọpụta nsonaazụ na faịlụ.
System: Windows 7, 8, 8.1, 10, XP, Vista
Atiya: Mmemme Nyocha
Onye Mmepụta: RaccoonWorks
Ime Nchọnchọ Ozi
Dekọọ vidiyo site na ihuenyo na Cam Free ISpring
Enweghị HDMI mgbe ị na-ejikọta laptọọpụ ma ọ bụ PC na TV
Kedu ihe ndị na-eto eto na ndị ọgbọ na-enweta ahịa
Ọ bụrụ na AutoCAD amaliteghị na kọmputa gị, enwela obi nkoropụ. Ihe mere eji eme ihe omume a nwere ike ịbụ ọtụtụ ihe na ọtụtụ n'ime ha nwere ngwọta. N'isiokwu a, anyị ga-aghọta otú ị ga - esi malite AutoCAD arụrụ ọrụ. Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na AutoCAD adịghị amalite Ihichapụ nsogbu CascadeInfo: Mgbe ịmalite AutoCAD, usoro ahụ mechiri ozugbo, na - egosi windo windo maka ọtụtụ sekọnd. GụKwuo
Mepee vidiyo WebMay
Mmemme maka ndekọ na-ada site na igwe okwu
https://termotools.com ig.termotools.com © Mmemme Nyocha 2019